Qaro weyn Cooper PCB - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
PCB qafiif ah
Fumax - Waa shirkad awood u leh inay soo saarto alaabo badan oo naxaas PCB ah. Khibrad badan, waxaan caan ku nahay soo saarista alaab tayo sare leh macaamiisheenna. Fumax sidoo kale waxay awood u leedahay inay habeyso PCB naxaas qaro weyn si ay u awoodaan inay si fiican ugu haboonaadaan baahida dhammaan macaamiisha.
Badeecada kala duwan ee Thick cooper PCB ee Fumax ay bixin karto：
* Lakabka layers 1-14 lakab） ；
PCB-ga naxaasiga ah wuxuu awood u leeyahay inuu ku sii wado wax ka sii badan fiilooyinka marka la barbardhigo isticmaalka qalabka kale ee naxaasta ee soo saarista fiilooyinka. Iyo isticmaalka PCB-ka naxaasta ahi wuxuu u oggolaanayaa in si siman loo qaybiyo tamarta kuleylka ee fiilooyinka sidoo kalena waxay kordhisaa xoogga fiilooyinka goobta xiriirinta. Waxay sidoo kale fududeeyaan oo suurtagal ka dhigaan sameynta qalab yar. Tani waa sababta oo ah fiilooyinka si fudud ayaa loogu laaban karaa si loo daboolo loona oggolaado abuuritaanka meelo badan oo qalabka yaryar ah.
Naxaas culus ayaa loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan, oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, hagaajiyeyaasha awoodda sare leh, kala-baxa kuleylka, kuwa wax beddela ee qorshaysan, isku-beddelayaasha awoodda, kombiyuutarka, militariga, bixinta korantada, korontada, nidaamka beddelaadda shabakadda korontada, iwm.
* Qalabka Alxanka
* Soosaarayaasha Solar Panel
* Qalabka Tamarta
* Qaybinta Awoodda Korantada
* Beddelayasha Awooda